Usanqenqeleza phambili uBuhari ngamavoti eNigeria | News24
Usanqenqeleza phambili uBuhari ngamavoti eNigeria
ABUJA – Usaqenqeleza phambili ngamavoti uMuhammadu Buhari njengoba kulindeleke imiphumela yokhetho eNigeria ngokusho kombiko.
Ukhetho lwaseNigeria lubhekwe ngabomvu njengoba ingelinye lamazwe ahamba phambili ngokukhiqiza umnotho ezwenikazi i-Afrika.
UBuhari uyimbangi enkulu kaGoodluck Jonathan onguMengameli waseNigeria ogaqele ihlandla lesibili kulolu khetho.
OLUNYE UDABA: IBoko Haram ibulale abangu-41 kuvotwa eNigeria
Ngokubika kweReuters ngoLwesibili ezifundeni ezingu-33 kwezingu-36 uBuhari oneminyaka engu-72 ubudala usethole amavoti angu-14 million.
UJonathan yena ulandela ngemuva ngamavoti angu-11 million kanti kule minyaka emihlanu eqhoqhobele lesi sikhundla iNigeria ihlangabezane nezigameko ezingezinhle okubalwa inkohlakalo kosopolitiki nokuhlaselwa kwaleli lizwe yiqembu iBoko Haram. Ukubalwa kwamavoti kusaqhubeka.